के फाइदा हुन्छ त ? हप्तामा एक दिन भोकै बस्दा, जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
खानपान सम्बन्धी अनुशासनको कुरा गर्दा उपवास पनि आउँछ । सही र सन्तुलित खाना खाएर मात्र पुग्दैन, बेलाबखत पाचन यन्त्रलाई विश्राम पनि दिनुपर्छ । खाली पेट बस्नुपर्छ । यसलाई हामीले ब्रत, उपवास, फास्टिङ जे नाम दिएपनि हुन्छ ।
यो एक दिन, दुई दिन सम्मको हुन्छ, आफ्नो अवस्था हेरेर । शरीरको शुद्धिकरण गर्न विशेष किसिमको विधी अपनाउन सकिन्छ, खानपानलाई नियन्त्रण गरेर । यस्तो विधी अन्र्तगत भोकै बस्ने, फलफूल मात्र खाने, उसिनेको खानेकुरा मात्र खाने वा सुपाच्य भोजन मात्र गर्ने तौरतरिका अपनाइन्छ ।
Don't Miss it कस्ताे हुन्छ लगनशील व्याक्ति ? जान्रुहाेस्
Up Next हामीले केटाकेटीहरूबाट सिक्नु पर्ने महत्वपुर्ण कुराहरू यस्ता छन्, जान्रुहाेस्